We Fight We Win. -- " More than Media ": Burma: Reform Education NOW !
Burma: Reform Education NOW !
" တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ အနာဂတ် နှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဟာ အဲဒီနိုင်ငံရှိ အုပ်စိုးသူ အစိုးရတွေ က လူထု ပညာရေး အပေါ် ဘယ်လောက်ထိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရှိသလဲ၊ တန်ဘိုးထားတက်မှု ရှိသလဲ အပေါ် မှုတည်ပါတယ်။ နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ အုပ်စိုးသူ အစိုးရ ဟာ အာဏာ တည်မြဲရေး အတွက် ပညာရှင်တွေ၊ နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေ ဖြစ်လာကြမဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ ကို ရန်သူလို ပြုမှုဆက်ဆံနေရင်တော့ အဲဒီနိုင်ငံဟာ အနာဂတ်မှာ အထီးကျန်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှု နောက်ကျ ကျန်ရစ်နေမှာပါပဲ။ Failed State ဆိုတဲ့ ကျဆုံးတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာပဲ။ "